रिभर साइडमा हट अवतारमा पूजाले यसरी खोलिन् मनको चाहना (भिडियो)
काठमाडौं, १० पुस । त्रिशुलीको किनारमा रहेको रिभर साइड पुगेकी नायिका पूजा शर्माले धमाधम कपडासँगै मनको कुरा पनि खुलेर गर्न चाहेको बताएकी छन् ।
त्रिशुली किनारमा पुगेर किन पूजाले आफूलाई हट र बोल्ड अवतारमा प्रस्तुत गरिन् ? त्रिशुली किनारको मनमोहन दृश्यले कि हुर्कंदो जवानीले ? होइन, यी दुवै कारणले भन्दा पनि चलचित्र ‘प्रेम गीत’को ‘जब पुग्छु रिभर साइड’ बोलको गीतमा पूजा यो अवतारमा देखिएकी हुन् ।
चलचित्रको म यस्तो गीत गाउँछु बोलको गीतले मार्केट पिटिरहेको बेला पूजाको अर्को हट रुपसहितको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको हो । नेपालमै पहिलोपटक उच्च गुणस्तरको प्रविधिको प्रयोग गरेको बताइएको यो गीतमा पूजा हट अवतारमा कोरसहरुसँग कम्मर भाँचेर नाँचिरहेकी देखिन्छिन् ।
रेनशा वान्तवा राईको कोरियोग्राफी र अर्जुन पोखरेलको संगीत रहेको उक्त गीत सुबानी मोक्तानले गाएकी हुन् । सन्तोष सेनले निर्माण गरेको चलचित्र प्रेम गीत भ्यालेन्टाइन डेको अवसर पारेर माघ २९ गतेबाट देशभर प्रदर्शनमा आउने बताइएको छ । सञ्जय लामाको छायांकन र सुरेन्द्र पौडेलको सम्पादन रहेको चलचित्रमा पूजासँगै अभिनेता प्रदीप खड्का प्रमुख भूमिकामा देखिनेछन् ।